Sony Xperia Z5 Vs Samsung Galaxy S6 ihu + | Akụkọ akụrụngwa
Sony Xperia Z5 Vs Samsung Galaxy S6 onu +, abụọ Refeyim ihu na ihu
Ahịa ekwentị na-aga n'ihu na-ama jijiji nke ukwuu na IFA emere na Berlin ahapụwo anyị ọtụtụ smartphones ndị a kara aka ịbụ nnukwu ntụnye ahịa na ọnwa ndị na-abịanụ. Obi abụọ adịghị ya na otu n'ime ọdụ kachasị pụta ìhè nke anyị hụrụ na mmemme German bụ Sony Xperia Z5, Ọ bụ ezigbo ọkọlọtọ nke na-akwụsị ọtụtụ mbọ ndị Sony mere iji wepụta ezigbo onye nọchiri Xperia Z3.
Ebe ndị a na-eweta na IFA ga-esonye na ndị niile anyị nwere ike ịhụ n'ụbọchị na-eduga na mmemme German. Ihe ọhụrụ dị n'etiti ha Samsung Galaxy S6 ihu +, nke taa anyị kpebiri iji ihu na ihu na Sony Xperia Z5, na duel nke Refeyim, na ịnwa ịbịaru nkwubi okwu na-adọrọ mmasị na karịa ihe niile ịmara nke nwere ike ịbụ ama kacha mma na ahịa.
Nke mbụ, anyị ga-enyocha njirimara na nkọwa nke njedebe abụọ ahụ, iji chọta onwe anyị wee malite ịbanye n'ime akụkụ ụfọdụ nke ngwaọrụ abụọ a dị elu.
1 Njirimara na nkọwa nke Sony Xperia Z5
2 Njirimara na nkọwa nke Samsung Galaxy S6 onu +
4 Na-egwu ala n'ime
6 Nsonaazụ nke duel
Njirimara na nkọwa nke Sony Xperia Z5
Akụkụ: 146 x 72.1 x 7,45 mm
Arọ: gram 156
Ihuenyo: 5,2 sentimita asatọ IPS Full HD, Triluminos
Nhazi: Octa isi Qualcomm Snapdragon 810 na 2,1 Ghz, 64 bit
Igwefoto mbụ: 23 ihe mmetụta megapixel. Autofocus 0,03 sekọnd na f / 1.8. Igwe ọkụ abụọ
Igwe n'ihu: 5 megapixels. Wide n'akuku anya
Ebe nchekwa RAM: 3 GB
Nchekwa ebe obibi: 32 GB. Gbasaa site MicroSD
Batrị: 2900 mAh. Chargekwụ ụgwọ ngwa ngwa. Ọnọdụ STAMINA 5.0
Njikọ: WiFi, LTE, 3G, WiFi Direct, Bluetooth, GPS, NFC
software: Android Lollipop 5.1.1 na nhazi oyi akwa
ndị ọzọ: mmiri na uzuzu na-eguzogide ọgwụ (IP 68)
Njirimara na nkọwa nke Samsung Galaxy S6 onu +
Akụkụ: 154,4 x 75,8 x 6.9 mm
Arọ: gram 153
Ihuenyo: 5.7 nke anụ ọhịa SuperAMOLED QuadHD panel. 2560 x 1440 pixel mkpebi.Njupụta: 518 ppi
NhaziExynos 7 octacore. Anọ na 2.1 GHz na anọ ọzọ na 1.56 Ghz
Igwefoto mbụ: 16 MP sensọ na ngwa anya image stabilizer na f / 1.9 aperture
Igwe n'ihu: 5 megapixel sensor nwere oghere f / 1.9
Ebe nchekwa RAMEbe nchekwa: 4GB LPDDR4
Nchekwa ebe obibi: 32 / 64GB
Batrị: 3.000 mAh. Ikuku ikuku (WPC na PMA) na ngwa ngwa
Njikọ: LTE Cat 9, LTE Cat 6 (dịgasị iche na mpaghara), WiFi
ndị ọzọ: NFC, ihe mmetụta mkpịsị aka, nyocha ọnụego obi
Onweghi onye m chere na m nwere ike inwe obi abụọ mgbe m hụrụ vidiyo na onyonyo dị na isiokwu a anyị na-eche ihu abụọ ọdụ na a nnọọ ihe ịga nke ọma imewe, na-eji ihe ndị dị adị na ọdịdị dị mma. Agbanyeghị, n'akụkụ a, echere m na Galaxy S6 ihu + dị ntakịrị karịa Xperia Z5 nke nwere usoro na-aga n'ihu ma e jiri ya tụnyere ụdị ndị ọzọ gara aga nke njedebe a.
Ma ọ bụ na ihu ihuenyo nke S6 ihu, iko ya na okpokoro ọla ya na-eme ka anyị nwee echiche dị ala smartphone na atụmatụ kacha mma na ahịa. N'ezie, ọ doro onye ọ bụla anya na ọ bụrụ na ngwaọrụ mkpanaka nke ụlọ ọrụ South Korea bụ 9 n'ihe gbasara imepụta, Xperia Z5 ọhụrụ bụ 8 yabụ anyị na-echekwa ngwaọrụ nwere nnukwu atụmatụ, ọ bụ ezie na anyị eruteghị ọkwa nke Samsung ọnụ.
Na-egwu ala n'ime
N'ime ekwentị abụọ anyị na-ahụ Nkọwa yiri nke ahụ na nke ahụ ga-enye anyị nnukwu arụmọrụ na ike. N'ihe banyere Sony ọnụ anyị na-ahụ Qualcomm Snapdragon 810 processor, ebe Samsung nọ na nhazi nhazi, nke e mere baptizim dị ka Exynos 7 na nke ahụ doro anya enyela nha mgbe ịnọ n'ogo nke ihe ọ bụla ọzọ processor Site n'ahịa.
Banyere RAM, na Z5 ọhụrụ anyị ga-ahụ 3GB na na S6 ihu + 4GB. Ihe dị iche, agbanyeghị, pere mpe, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na anyị agbadoro n'akụkụ nke abụọ ahụ n'ihe gbasara ike na arụmọrụ ka mma, anyị ga-anọnyere ngwaọrụ mkpanaka Samsung.
Ebumnuche abụọ ahụ na-enye anyị ohere nchekwa nke 32GB ọ bụ ezie na n'ihe gbasara Xperia Z5, anyị nwere ike ịgbasa ha site na iji microSD kaadị, ihe na-adịghị eme na Samsung nke bụ otu, n'ihi ya, anyị enweghị ike iwepu batrị ma ọ bụ webata kaadị microSD.
Igwefoto nke ọdụ abụọ bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ kacha mma n'ahịa, ọ bụ ezie na oge a echere m na anyị kwesịrị ịdabere na inye Xperia Z5 dị ka onye mmeri, n'ihi ọdịnala ogologo nke Sony n'ihe gbasara igwefoto yana n'ihi na ọ bụrụ na ọnụ nke ezinụlọ Xperia ahụ pụtawo, ọ dịla na ese foto ahụ.
N'ezie, ọ dịghị onye na-eche na Galaxy S6 ihu + enweghị igwefoto dị elu, n'ihi na ọ dịghị otú ahụ, dị anya na ya. Ọ bụrụ na n'ime imewe ahụ anyị kwuru na S6 nwetara ọkwa dị elu, n'ọnọdụ ahụ ọ bụ njedebe Sony na-enweta ọkwa dị elu.
Xperioa Z5 na-anọchi anya inwe ihe mmetụta 23 megapixel ExmorRS, mbugharị 5X yana ụfọdụ ọganiihu na-atọ ụtọ nke na-elekwasị anya nke ga-eme ka anyị nweta foto nke oke mma, nkọwa na nkọ. Banyere Galaxy S6 ihu + anyị na-ahụ ihe mmetụta 16 megapixel na ngwa anya ihe na-eme ka ihe ngosi na-eweta ihe onyonyo dị elu.
Nsonaazụ nke duel
Eziokwu bụ na O siri ezigbo ike iji merie otu ma ọ bụ ndị ọzọ ọnụ na a duel na ọ bụ na ma kwụpụta n'akụkụ ụfọdụ n'akụkụ nke ọzọ ma n'ozuzu ha na-enye nnukwu ahụmịhe na arụmọrụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngalaba niile anyị nwere ike nyochaa. Agbanyeghị, echere m na nke ahụ Ekwesịrị m inye dị ka onye mmeri nke duel a nke Galaxy S6 + Samsung, maka mmụba ndị o mebere na maka ihe o jiri wepụta ihe egwu.
Sony Xperia Z5 bụ Smartphone nke enweghị obi abụọ, mana nke na-akwado akara n'ihu na-enweghị ihe egwu ọ bụla. Ikekwe Z5 a chọrọ naanị ịbụ ezigbo eze nke ekwentị mkpanaaka a facelift nke gụnyere ụfọdụ ihe ọhụụ banyere usoro imewe, nke site n'ụzọ ọ fọrọ nke nta ka ndị ọrụ niile tụrụ anya na nke abịarutebeghị.
Otu anyị gwara gị na nke a bụ echiche anyị nke mere na ugbu a, anyị ga-achọ ịma nke gị ma mara onye mmeri nke duel a n'etiti Sony Xperia Z5 na Samsung Galaxy S6 ihu + bụ maka gị. You nwere ike iziga anyị ya dị ka oge mbụ site na oghere edebere maka ikwu na post a ma ọ bụ site na netwọkụ mmekọrịta anyị nọ na ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Sony Xperia Z5 Vs Samsung Galaxy S6 onu +, abụọ Refeyim ihu na ihu
Kedu ihe ederede na-ezighi ezi, anyị na-ekwu maka smartphones nke ụdị dị iche iche kwesịrị iji tụnyere S6 ihu + na Z5 dị elu nke na-egwu n'otu ụdị ahụ ma ọ bụ S6 nkịtị megide Z5 nkịtị.
»Ma nke ahụ na-akwado akara n'ihu na-enweghị ihe egwu ọ bụla»
Yabụ ihuenyo 4K abụghị ihe dị egwu? Ihe mkpisi aka na-agụ adịghị ọbụna anya na ya?
Ihe mgbochi IP68, ha amaghịdị na Sony nwere ya.
Lee egwu na-emenye ụjọ ...
Maazị Andres, mgbe onye edemede ahụ kwuru na Sony na-akwado akara na-aga n'ihu, o doro anya na ọ na-ezo aka n'ichepụta ekwentị ma ọ bụghị njirimara ya. N'aka nke ọzọ, ana m ekerịta ọtụtụ okwu nke Maazị Bruno
iPhone 6S na Samsung Galaxy S6 Edge +, ọgụ ahụ ga-abụ smartphone kacha mma
Etu esi emechi taabụ na Safari ngwa ngwa